PSM: volavolaina ny drafi-panajariana ho an’ny fari-dranomasina | NewsMada
PSM: volavolaina ny drafi-panajariana ho an’ny fari-dranomasina
Natao, omaly, ny atrikasa fakan-kevitra hamolavolana ny Drafitrasa mikasika ny fari-dranomasina (PSM). Mikarakara azy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP), miaraka amin’ny fitantanana ny ranomasina sy ny toekarena manga ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep). Namatsy vola ny fanatanterahana azy ny tetikasa USAID Hay Tao.
Anisan’ny natao ny fanangonana ny antontam-baovao samihafa any amin’ny mpisehatra voakasika. Haravona izany hahafahana mamoaka drafitra lasitra amin’ny lafiny fandaminana sy fitantanana, ny lalàna sy ny rafitra tokony hatsangana isan-tsokajiny avy.
Tafiditra ao anatin’ny karazana atrikasa samihafa karakarain’ny USAID Hay Tao ity natao teto Antananarivo ity ka mpiara-miombon’antoka amin’ny fanatanterahana PSM eto Madagasikara.
Hakana traikefa ny firenena miteny anglisy
Tanjona ny hamantarana ny zava-dehibe amin’ny fanajariana fari-dranomasina eto Madagasikara, mifandray amin’ny fanajariana ny tany. Nojerena ny paikady mahomby amin’ny famaritana ny saritany an-dranomasina ka hakana traikefa ny firenena miteny anglisy, izay efa lasa lavitra amin’ity sehatra ity. Dinihina ny lafiny lalàna sy ny rafitra apetraka amin’ny hanatanterahana ny PSM.
Nilaza ny minisitra MATP, Andrianainarivelo Hajo, omaly, fa zava-dehibe tokoa ny fametrahana ny PSM, satria tsy mbola nisy teto amintsika hatramin’izay. Samy nanao ny azy ny isan-tsehatra avy, samy nanana ny antontam-baovao ka tokony hatao ny fandrindrana sy fandravonana azy ireny. Anisan’izany ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny ao amin’ny fizahantany, ny an’ny harena an-kibon’ny tany, sns.